Habka Kuleylka Daaweynta Kuleylka Daaweynta-waa maxay daaweynta kuleylka kuleylka?
Waa maxay habka kuleylka kuleylka ee lagu daaweynayo dusha sare?
Kuleylka induction waa geedi socod daaweyn kuleyl ah oo u oggolaanaya kuleylka aadka loo bartilmaameedsado ee biraha adoo adeegsanaya elektromagnetic induction. Nidaamku wuxuu ku tiirsan yahay durdurrada korantada ee curyaanka ah ee ku jira maaddada si loo soo saaro kuleylka waana habka ugu habboon ee loo adeegsado isku xirnaanta, adkeynta ama jilicinta biraha ama waxyaabaha kale ee wax lagu tababaro. In geeddi-socodka wax soo saarka casriga ah, foomkan daaweynta kuleylka waxay bixisaa isku-dhafan faa'iido leh oo ah xawaare, joogteyn iyo xakameyn. In kasta oo mabaadi'da aasaasiga ah si fiican loo yaqaan, horumarka casriga ah ee tikniyoolajiyadda adag ayaa ka dhigtay geedi socodka si layaableh fudud, habka kululaynta kharash-ku-ool ah ee dalabyada ku lug leh ku biirista, daweynta, kululaynta iyo qalabka baaritaanka.
Daaweynta kuleylka kuleylka, iyada oo loo marayo isticmaalka aadka loo xakameyn karo ee koronto kuleylka kuleylka leh, ayaa kuu oggolaan doonta inaad xulato astaamaha jireed ee ugu fiican kaliya qayb kasta oo bir ah-laakiin qayb kasta oo ka mid ah qaybta birta. Adkaynta indha-indheynta waxay ku siin kartaa cimri dherer sare si loo qaado joornaalada iyo qaybaha usheeda dhexe iyada oo aan loo sadqeynin duleelka lagama maarmaanka u ah qabashada culeyska naxdinta iyo gariirka. Waad adkeyn kartaa dusha sare ee sitaalka iyo kuraasta waalka ee qaybaha adag adigoon abuurin dhibaatooyin qallooca. Tan macnaheedu waa inaad awood u leedahay inaad adkaato ama aad kudirto aagag gaar ah adkaysi iyo ductility siyaabo sida ugu fiican ugu adeegi doonta baahiyahaaga.
Faa'iidooyinka Adeegyada Daaweynta Kuleylka Induction
Daaweynta Kuleylka Diirada Saaran Adkaynta dusha sare waxay haysaa ductility asal ah oo udubdhexaad ah iyadoo sii adkeyneysa aagga dharka sare ee qaybta. Meesha adag ee adag ayaa si sax ah loo kontoroolaa marka la eego qoto-dheerida, baaxadda, goobta iyo adkaanta.
Ku-habboonaan La'aan ah Tirtir iswaafaq la'aanta iyo arrimaha tayada leh ee laxiriira ololka furan, kuleylka kuleylka iyo habab kale. Marka nidaamka si sax ah loo miisaamo oo la dejiyo, malahan shaqo mala awaal ama kala duwanaansho; qaabka kululaynta waa mid soo noqnoqda oo joogto ah. Nidaamyada adag ee casriga ee casriga ah, xakamaynta heerkulka saxda ah waxay bixisaa natiijooyin isku mid ah.
Waxsoosaarka ugu badan Heerarka wax soosaarka waa la kordhin karaa maxaa yeelay kuleylka si toos ah iyo si dhakhso leh ayaa loo horumariyaa (> 2000º F. gudaha <1 ilbidhiqsi) gudaha qaybta. Bilowgu waa mid deg deg ah; looma baahna diirimaad ama qabow wareeg ah.
Tayada wax soosaarka oo la wanaajiyey Qaybaha waligood xiriir toos ah lama yeeshaan ololka ama cunsurka kuleylka kale; kuleylka waxaa lagu kiciyaa qaybta lafteeda iyada oo lagu beddelayo korantada korantada. Natiijo ahaan, badeecada wax soo saaraysa, dhalanrog iyo qiimayaasha la diiday ayaa la yareeyay.
Isticmaalka Tamarta Hoos Udhaca Ma ka daashay biilasha korantada ee kororka? Nidaamkan tamarta ku habboon ee tamarta gaarka ah u rogaya illaa 90% tamarta ku baxday tamarta wuxuu u beddelaa kuleyl waxtar leh; foornooyinka foomka guud ahaan waa kaliya 45% tamar-ku-ool ah. Looma baahna wareegyo kululeyn ama qaboojiye sidaa darteedna ku-joogsashada kuleylka ayaa loo yareynayaa ugu yar.
Deegaanka Gubashada shidaalka dhaqameed ee fosilku waa mid aan loo baahnayn, taasoo dhalisay nadaafad, hanaan aan wasakh lahayn oo gacan ka geysan doonta ilaalinta deegaanka.
Waa maxay kuleylka induction?
Kuleylka kuleylka waa Qaabka Kuleylka La Xiriir La'aanta ee jirka, kaas oo ka dhuuqa tamarta aag kale oo Magnetic Field ah, oo ay soo saartay Induction Coil (Inductor).
Waxaa jira laba hanaan oo nuugista tamarta:
jiilka qulqulka (eddy) qulqulka jirka gudihiisa kaas oo sababa kuleylka sababtoo ah iska caabinta korantada ee walxaha jirka
hysteresis kululeeyaha (oo kaliya qalabka birlabta oo KELIYA!) Sababtoo ah khilaaf ka yimid mugga magnetic micro (domains), kaas oo wareegaya kadib jihada jihada birlabta birlabta
Mabda 'kululaynta kuleylka
Chain of ifafaale:
Kulka kuleylka kuleylka waxay hadda (I1) u gudbisaa xarkaha soo-baxa
Wareegyada qulqulka (ampere-jirsado) waxay dhaliyaan aagga magnetka. Khadadka aaggu had iyo jeer way xiran yihiin (sharciga dabeecadda!) Khad walbana wuxuu ku wareegaa isha hadda jirta - gariiradda ayaa is beddela iyo workpiece
Kala beddelka magnetic-ka ee ku wareegaya qaybta iskutallaabta (oo ay weheliso qaybta) waxay dhalisaa danab qaybta
Danab duuf leh ayaa abuuraya qulqulo qulqulaya (I2) qaybta ku qulqulaya jihada ka soo horjeedda qulqulka qulqulka halka ay suurtagal tahay
Xaga Eddy wuxuu dhaliyaa kuleylka qeybta
Awoodda Awoodda ee Kuleylka Kuleylka Kuleylka
Beddelaadda hadda jirta waxay isbeddelaysaa jihada laba jeer inta lagu jiro wareegga wareeg kasta. Haddii soo noqnoqoshada ay tahay 1kHz, hadda wuxuu isbedelayaa jihada 2000 jeer ilbiriqsi.
Wax soosaarka hadda iyo danabku wuxuu siinayaa qiimaha awoodda degdegga ah (p = ixu), taas oo oscillates udhaxeysa korontada iyo gariiradda. Waxaan dhihi karnaa in awooda qeyb kamid ah ay nuugeyso (Firfircoon Awood) oo qeyb ahaan ay ka muuqato gariiradda. Batariga Capacitor-ka waxaa loo isticmaalaa in koronto-dhaliye looga soo dejiyo xoogga falcelinta. Capacitors-ku waxay ka helaan awooda falcelinta gariiradda waxayna dib ugu celiyaan gariiradda taageeraya oscillation-ka.
Wareeg “coil-transformer-capacitors” waxaa loo yaqaan Resonant ama Tank Circuit.
Categories FAQ, Technologies Tags daaweynta kuleylka, kululaynta kuleylka, adeegga kuleylka, daaweynta kuleylka, daaweynta kululaynta, Daaweynta kuleylka HF, daaweynta kuleylka soo noqnoqda badan, daaweynta kuleylka soo noqnoqda badan, daaweynta kuleylka induction, habka daaweynta kuleylka kuleylka, daaweynta kuleylka dusha sare, daaweynta kululaynta dusha sare Post navigation